जहाँ किन्न खाना र लुगा - newcomers लागि जानकारी | USAHello
तिनीहरूले आवश्यक किराना पसलहरू कहाँ किन्न केही newcomers छैन पक्का, र तिनीहरूले मूल देशबाट परम्परागत खाद्य पदार्थ सम्झना हुन सक्छ. त्यहाँ विभिन्न स्थानहरू र संयुक्त राज्य अमेरिका मा किनमेल जान तरिकाहरू छन्. खाना खरीद लागि पसलहरूमा को प्रकार बारे जान्नुहोस्. परम्परागत खाद्य पदार्थ कसरी किन्ने पत्ता. लुगा जहाँ किन्न र अनलाइन कसरी दोकान गर्न पढ्न.
अमेरिकामा किनमेल, फोटो प्रतिलिपि अधिकार बेलायत सहायता, सीसी..
शब्द किराना पसलहरू तपाईँले किन्न खाना मतलब. तपाईँले खर्च गर्न प्रयास गर्नुपर्छ 20% वा आफ्नो कुल परिवार किराना पसलहरू प्रत्येक महिनाको आय को कम. यदि यो अर्थ $1,000 प्रत्येक महिना आय मा, तपाईं खर्च गर्नुपर्छ $200 वा किराना पसलहरू मा कम. यदि तपाईं प्राप्त $500 हरेक महिना, तपाईं मात्र खर्च गर्न उठयो $100 वा खाना कम, तपाईं आवास र उपयोगिता लागि पनि भुक्तानी गर्न भने.
यहाँ खाना खरीद बारेमा जान्न केही उपयोगी कुराहरू छन्:
आफ्नो घर देशमा सानो खर्च केही कुराहरू संयुक्त राज्य अमेरिका मा महंगा हुन सक्छ. जस्तै, बर्मा बाट शरणार्थी ताजा नरिवल र साधारण खान मन सक्छ, तर यी वस्तुहरू महंगा छन्.
मासु र फल अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका मा महंगा छन्. त्यसैले, तपाईंले केही नयाँ खानेकुरा साथै आफ्नो परम्परागत खाद्य पदार्थ खान प्रयास गर्न आवश्यक हुन सक्छ.
खरीद खाना, विशेष गरी चामल र सिमी र धेरै तरकारी, को किराना पसल बाट र यो रेस्टुरा देखि खाना खरीद भन्दा साधारण कम खर्चिलो खाना पकाउने आफैलाई छ.
यदि एक स्टोर मा एउटा वस्तु मूल्य हो, तपाईं मूल्य तिर्न. तर, यो बजार वा स्टोर प्रयोग सामान बिक्री मा कम साँचो हो.
किराना पसलहरू कहाँ किन्न
यहाँ तपाईँले खानेकुरा किन्न सक्नुहुन्छ केही फरक ठाउँ हुन्:
अमेरिकामा किराना पसल कि खाना को विभिन्न प्रकार ले ठूलो स्टोर छन्. त्यहाँ धेरै ठूलो किराना छन् “चेन स्टोर।” एक श्रृंखला अमेरिकी मार्फत विभिन्न शहर मा नै हुन् भनेर स्टोर को एक समूह छ. किराना पसल यस्तो फल र तरकारी रूपमा खण्डहरू विभाजित छन्, मासु, समर्थित खाद्य पदार्थ, आदि. धेरै ठूलो किराना पसल तपाईं मुक्त लागि साइन अप गर्न प्रोत्साहन “क्लब” कार्ड, वा “सदस्यता कार्ड. किनभने तपाईं अक्सर एक कार्ड आफ्नो खाना मा छुट प्राप्त यो राम्रो छ, तापनि कार्ड निःशुल्क छ. अन्य स्टोर, यस्तो Costco रूपमा, आफ्नो कार्ड चार्ज र थप cheaply खाना को ठूलो परिमाणमा बिक्री. यी तपाईंले ठूलो परिवार छ भने सामेल लायक छन् र ठूलो परिमाणमा खाना र घरेलू वस्तुहरू खरीद रहे.
अमेरिकामा सबैभन्दा शहर किसानहरु छ’ बजार, विशेष गरी गर्मी मा. एक किसान मा’ बजार, तपाईं ताजा फल र तरकारी किसान आफूलाई द्वारा हुर्किसकेका र बेच पाउन सक्नुहुन्छ. गर्मी याममा, you may spend less money than you would atagrocery store for the same items, तर सधैं - केही ठूलो किराना पसल जैविक उत्पादन को सानो रकम बढ्न गर्ने भन्दा कम किसानहरु बेच्न सक्षम छन्, जस्तै.
कहिलेकाहीं यी किराना पसलहरू वा खाना को सानो मात्रा बेच सानो स्टोर छन्. जबकि यी पसलहरु सुविधाजनक हुन सक्छ किनभने तिनीहरूले आफ्नो घर नजिक छन्, तिनीहरूले अक्सर किराना पसल भन्दा बढी महंगा छन्.
केही समुदाय जातीय स्टोर छ, एक विशेष जातीय पृष्ठभूमि देखि किराना पसलहरू बेच्छ एक स्टोर अर्थ. जस्तै, त्यहाँ एक हुन सक्छ “भारतीय बजार” वा “चिनियाँ बजार” ती देशका खाद्य पदार्थ बेच्छ. तपाईंलाई धेरै शहर मा जातीय किराना पसल पाउन सक्नुहुन्छ FindHello.
संयुक्त राज्य अमेरिका मा रेस्टुरेन्ट खाना प्राप्त गर्न सबैभन्दा महंगा ठाउँ हुन गर्छन. छिटो-खाना रेस्टुरेन्ट नियमित रेस्टुरेन्ट भन्दा सस्ता छन्, तर तपाईंले त धेरै अस्वस्थ खाना खान होइन ध्यानपूर्वक छनौट गर्न.
त्यहाँ जातीय खाना र अन्य विशेषता खाद्य पदार्थ तपाईंको शहर वा शहरमा स्थानीय पाउन गाह्रो हो कि बिक्री वेबसाइटहरु को एक नम्बर हो. एक उदाहरण हो eFood डिपो.
तपाईं अनलाइन खोजी गरेर विशेषता खाद्य पदार्थ पाउन सक्नुहुन्छ. शब्दहरू टाइप "किन्न [खाना खोज्दैछौ] अनलाइन।”
वस्त्र र घरेलू वस्तु किन्न
अमेरिकामा, तपाईं कहाँ आफ्नो घर लागि लुगा र कुराहरू लागि दोकान को विकल्प धेरै छन्. तपाईं सधैं जब उनि बिक्री छन् कुराहरू किन्न प्रयास गर्नुपर्छ!
बचत स्टोर वा प्रयोग र Secondhand स्टोर
जब तपाईं लुगा जहाँ किन्न सोच रहे, तपाईं पैसा बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने बचत स्टोर विचार. बचत स्टोर लुगा बेच्न, घर वस्तुहरू, र फर्नीचर अन्य टाढा दिनुभएको छ. तपाईं हेर्न समय लाग्न भने, तपाईं अक्सर धेरै राम्रो लुगा पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईंको भान्सा लागि वस्तुहरू, फर्नीचर, खिलौने, र बचत स्टोर मा थप. यी पसलहरु धेरै कम लागत हुन गर्छन, र जहाँ भण्डारमा सबै बिक्री मा छ अक्सर दिन छ.
ग्यारेज बिक्री र यार्ड बिक्री
एक ग्यारेज बिक्री वा यार्ड बिक्री प्रयोग वस्त्र र घरेलू वस्तुहरू फेला ठूलो ठाउँ छ. यी वस्तुहरू सामान्यतया एकदम सस्तो हो. ग्यारेज बिक्री र यार्ड बिक्री तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा सट्टापट्टा गर्न सक्नुहुन्छ केही स्थानहरू मध्ये एक हो. एक ग्यारेज वा यार्ड बिक्री मा तपाईं यदि यो अर्थ, तपाईं वस्तुमा लेखिएको छ के भन्दा कम मूल्य को लागि अनुरोध गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ.
विभाग स्टोर र मल
तपाईं पनि विभाग स्टोर वा मल मा दोकान. यी पसलहरु अधिक महंगा हुन गर्छन र प्रसिद्ध नाम ब्रान्डहरु छ. यो ब्रान्ड चिरपरिचित छ किनभने वस्तुहरू लोकप्रिय छन् मतलब, यस्तो नाइके जूता रूपमा.
Superstores बेच लगभग सबै संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्टोर छन्. यी Walmart जस्तै स्टोर समावेश, लक्ष्य, र Kmart. यी पसलहरु नाम ब्रान्ड विभाग स्टोर भन्दा साधारण सस्ता छन्.
तपाईंको नयाँ सहरमा स्थानीय पसलहरु धेरै शायद छन्. यसलाई आफ्नो पैसा आफ्नो समुदायमा रहन्छ किनभने गर्न स्थानीय दोकान राम्रो छ. तपाईं पनि अर्को शरणार्थी स्वामित्वमा एक स्टोर पाउन सक्छ.
तपाईं आफ्नो घर को लागि आइटम आवश्यक वा आफ्नो घर मर्मत गर्न भने, एक हार्डवेयर पसलमा तपाईं दोकान. यी स्टोरहरूमा काम गर्ने मान्छे घर मर्मत बारे आफ्नो प्रश्नहरूको जवाफ हुनेछ.
अनलाइन र मेल आदेश
अमेरिका को एक धेरै आफ्नो लुगा अनलाइन वा मेल मा आउन क्याटलग देखि किन्न. अमेरिकामा, के तपाईं किन्न लुगा फर्कन सक्नुहुन्छ अनलाइन वा एक सूची देखि, बस जस्तै तपाईं पसलहरुमा किनेको वस्तुहरू फर्कन सक्नुहुन्छ.
संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्टोर भने तिनीहरूलाई गलत कुरा हो वा तिनीहरू केवल आफ्नो मन परिवर्तन पनि मान्छे सामान फिर्ता गरौं. तपाईं यसलाई प्रयोग गरेपछि तर तिनीहरूले तपाईंलाई केहि फर्कन अनुमति छैन. जब तिमी दोकान, आफ्नो रसिद राख्न. यो वस्तु खरीद र तपाईंले यसलाई किनेको जब कि प्रमाण छ. के तपाईं एउटा वस्तु फिर्ता गर्न चाहनुहुन्छ निर्णय भने, तपाईं रसिद आवश्यक हुनेछ. यो ताजा खाद्य पदार्थ फर्कन कठिन छ, तर यदि तपाईंलाई SPOILED वा विगतका थियो फेला तपाईं सधैं खाना फिर्ता गर्नुपर्छ यसको “द्वारा बेच्न” मिति.
एक वैश्विक धन्यवाद लागि व्यञ्जनहरु 2018